#कार्यशैली Archives - Left Review Online
नेतृत्वको कार्यशैली सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण समस्या
क. चाउ एनलाई २०७६ माघ १३ गते सोमवार
कमरेहडहरुको विचारधारा र कार्यशैलीमा त्रुटीहरु हुँदा, हामीले उनीहरुलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । बरु हामीले उनीहरुलाई विश्वास गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई प्रगति गर्नमा मद्दत गर्न खुब कोशिस गर्नुपर्छ । यो कामरेड माओत्सेतुङको नेतृत्व शैली हो । हामीले हाम्रा प्रत्येक कामरेडहरुको आधारभूत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ ऊ आधारभूत रुपले विश्वासयोग्य...बाँकी
#क. चाउ एनलाई#कमरेड#कार्यशैली#पार्टी#विचारधारा
क. माओत्सेतुङ २०७६ असार २७ गते शुक्रवार
जोसुकैले पनि पार्टीको आमदिशालाई समर्थन गर्दछन् । पछिल्लो वर्ष प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य आमदिशालाई परिभाषित गर्नु थियो । तर हामीले आशा गरेजति सम्भव भएन । यो हाम्रो कामको तरिकासम्बन्धी प्रश्न हो । यहाँ कामको तरिकासम्बन्धी सोह्र बुँदा दिइएको छ । १. समझदार बन, निर्णायक बन हाम्रा केही कमरेडहरूमा बिल्कुलै...बाँकी
#कम्युनिष्ट जीवनशैली र कार्यपद्धतिबारे#कार्यशैली#जीवनशैली#माओ त्सेतुङ#माओत्सेतुङ